Astaamaha qaansoroobaadka qaansoroobaad | Kalluunka
Maria | | Aquarium biyo qabow
Maanta waxaan rabnaa inaan idinla wadaagno astaamaha kaluunka qaansoroobaad, nooc ka mid ah pez kuwaas oo badiyaa deggan biyaha macaan ee galbeedka Waqooyiga Ameerika.
Celceliskiisa culeyskiisu waa 3.60 kiilo, cimriga nolosha waa 4 ilaa 6 sano. Cunnadeedu waa cunno dhererkeeduna wuxuu gaaraa 76 sintimitir.
Kalluunkan quruxda badan Waxay u dhalatay harooyinka iyo wabiyada aagga buurta Rocky (Waqooyiga Ameerika). Sanado badan kalluunka ayaa lagu soo bandhigay adduunka oo dhan sababtuna waa adeegsiga kalluumeysiga isboortiga iyo hilibkiisa suugaanta leh. Nooc aad loo qiimeeyo oo la mahadiyo.
Markaad aragto mid wuxuu ogaadaa muunad aad u cajiib ah oo leh midabbo kala duwanaan doona iyadoo ku xiran deegaanka ay joogaan, da'dooda iyo habka taranka. Midabkiisa ugu caansan waa buluug cagaar ah ama jaale cagaar ah oo dhinac walba leh xarriiq casaan ah, calooshu waa caddaan waxayna leedahay dhibco madow dhinaca dambe iyo baalasha.
Kalluunka qaansoroobaadku waa qaraabo qoys salmon, oo sida kuwan oo kale waxay gaari kartaa baaxad weyn. In kasta oo celcelis ahaan ay gaarayaan 76 sintimitir, tijaabooyin qaar oo cabiray in ka badan 1.20 mitir culeyskoodana ka badan 24 kiilo ayaa la arkay.
Hoygeeda ay door biddo waa wabiyada, togagga iyo harooyinka leh biyo hufan oo qabow., mararka qaarkood waxay ka tagaan biyaha macaan ilaa ay badda ka gaaraan. Dadka waaweyni badanaa way haajiraan, waqtigaas waxay helaan atom at qalin ah.
Waxay quutaan cayayaanka, qolofta iyo kalluunka yaryar. Waqtigan xaadirka ah waa nooc ka mid ah, aad u tiro badan, adduunka oo dhan.
Macluumaad dheeraad ah - Kalluunka Colisa Fasciata
Wadada buuxda ee maqaalka: Kalluunka » Aquarium-ka biyaha qabow » Aquarium biyo qabow » Kaluun qaansoroobaad
Kalluunka leh xusuus wanaagsan